Arsenal Oo Ku Ciil Baxday AC Milan Xili Ay Ku Khaarijiyeen San Siro Kulankii Europa League %
Xidigaha Arsenal, ayaa guul darooyinkii ugu dambeeyay ee soo gaaray waxay kala dul-dhaceen caradii ay ka qaadeen AC Milan, kadib markii ay kula dheeleen garoonkooda ciyaar ka tirsaneed lugta hore ee tartanka Europa League.
Gunners-ka, ayaa waxaa soo gaaray Sideedii kulan ee lasoo dhaafay guul darooyin xiriir ah, waxayna noqotay naadigii ugu horeysay ee sanadkaan 2018 laga badiyo tiro kulamaadaas ah, tartan walba oo Yurub laga dheelo.
Laakiin, ciyaartii ay San Siro ku booqdeen kooxda Milan ayaa waxay iska tirtireen ceebtaas kadib markii ay guul weyn oo 2-0 ay kasoo qaateen, taasoo marka la eego ay iyaga u tahay faa’ido ah, maadaama lugta dambe gurigooda la aadayo.
Gunners-ka oo goolashaan heshay bogga hore ee ciyaarta ayaa waxay uga mahad-naqeysaa ciyaartoyda kala ah: Henrikh Mkhitaryan, oo goolka furitaanka dhaliyay daqiiqadii 15aad iyo Aaron Ramsey oo daqiiqadii 45aad dhaliyay.
Goolka uu dhaliyay Ramsey, ayaa wuxuu ahaa mid uu Goolhayaha kooxda AC Milan dhulka uga tegay kadib markii Baas qurux badan oo nax-bixis ah uu ka helay ciyaaryahanka lagu magacaabo Mascuud Ozil.
Sikastaba, guud ahaan daqiiqadihii loo qorsheeyay ciyaartaan, Arsenal ayaa waxay kusoo badisay 2-0, waxayna tani utahay faa’ido weyn, iyadoona lugta labaad loo balansan yahay in Emarites lagu dheelo 15-ka bishaan Maarso.
RASMI: Shaxdii Ugu Fiicneed Kulamadii Isbuucan Ee UCL Oo Lasoo Saaray & CR7 Oo Hogaaminaya